ဂျပန်နိုင်ငံ ပျက်စီးနိုင်ချေရှိတယ်လို့ ထောက်ပြလာတဲ့ Elon Musk - JAPO Japanese News
ဂျပန်နိုင်ငံ ပျက်စီးနိုင်ချေရှိတယ်လို့ ထောက်ပြလာတဲ့ Elon Musk
ဂါ 10 May 2022, 17:25 ညနေ
ဒီစကားကို ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုတဲ့ပညာရှင် Elon Musk ကိုယ်တိုင် ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ကားလောကကို တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တင်ပေးလိုက်တဲ့ Tesla!
ဒီအပြင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖြင့် အာကာသစီးပွားရေးကို ထိုးဖောက်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တဲ့ SpaceX စတာတွေကို တည်ထောင်ခဲ့သူဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဂျပန်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ဟပြောလာခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ဟာလက်ရှိလူဦးရေ ၁၂၅.၅၀ သန်းရှိပါတယ်။
မနှစ်ကနဲ့ယှဥ်ရင် လူဦးရေ ၆၄၀,၀၀၀ ဦးလျော့နည်းသွားပါတယ်။
Elon Musk ဟာ သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဒီလိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သိသာထင်ရှားချက်အရ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းဟာ သေဆုံးနှုန်းကိုမကျော်လွန်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဂျပန်ဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
ဂျပန်လူမျိုးတွေ လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘဲ၊ လူဦးရေဆက်တိုက်လျော့နည်းနေမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ့် ခွန်အားကျဆင်းပြီး၊ နိုင်ငံအနေနဲ့ပါပျောက်ကွယ်သွားမယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်မျိုးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်လူဦးရေဟာ ၃၅ သန်း လောက်ရှိရင် တော်ပါပြီး၊ ကောင်းပါတယ် လို့ဖြေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းခေတ်၊ တည်ငြိမ်ပြီးအေးချမ်းသာယာခဲ့တဲ့ အဲဒိုခေတ်တစ်ခေတ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်လောက်က လူဦးရေစုစုပေါင်းဟာ ၃၃ သန်း ခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း၊ ခေတ်မီတိုးတက်လာတဲ့ Meiji ခေတ်မှာ လူဦးရေ ၃၅ သန်းကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့၊ ဒီအချိန်ကာလဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် အတည်ငြိမ်ဆုံးခေတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်နဲ့နှိုင်းယှဥ်ကြည့်ရင် လူဦးရေ ၄ ပုံ ၁ ပုံတောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလူဦးရေလောက်နဲ့ ဂျပန်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တာလားလို့မေးရင် အတော်‌လေးသံသယဖြစ်စရာပါ။
လူဦးရေနည်းတယ်ဆိုတာက အလုပ်လုပ်တဲ့လူမရှိသလို၊ အခွန်ပေးဆောင်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် လူသားတွေအစား အလုပ်လုပ်ပေးမယ့်စက်ရုပ်နဲ့ AI ကို တီထွင်ဖို့ကလွဲပြီး တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း ဒါဟာဂျပန်နဲ့သာဆိုင်တဲ့ ပြဿနာမဟုတ်ပုံရပြီး၊ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၆၄ ခုနှစ်မှာ ၉.၇ ဘီလီယံအထိတိုးလာတဲ့ကမ္ဘာ့လူဦးရေဟာ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ပြန်လည်လျော့ကျသွားမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ယဥ်ကျေးမှု ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်တော့ အချို့သော လူမှုရေးအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် လူဦးရေကိုလိုအပ်ပေမဲ့လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာကြီးဟာ ဒါကိုစတင်ရိုက်ခတ်လာပါတယ်။
အန်နီမေးရှင်းတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့ စက်ရုပ်နဲ့AI ဟာ လူသားတွေနေရာမှာ အစားထိုးအလုပ်ဝင်လုပ်တဲ့ခေတ်ဟာ လက်တွေ့မဖြစ်လာဘူးဆိုရင် လူဦးရေမျိုးသုဥ်းမှုအန္တရာယ် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်ဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအရ အနုတ်ဘက်ကိုသွားနေသလို၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အကြပ်အတည်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။
(၇) ရက်နေ့ တိုကျိုတစ်မြို့တည်းတွင် ကူးစက်မှုပေါင်း ၂၄၄၇ ဦးရှိ !!!